ဆိုနီယာ Sotomayor: အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်
ဆိုနီယာ Sotomayor အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဆိုနီယာ Sotomayor အချက်အလက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်ပေါ်ပထမဦးဆုံး * ဟစ်စပန်းနစ်တရားမျှတမှု for: လူသိများ
ရက်စွဲများ: ဇွန်လ 25, 1954 -
အလုပ်အကိုင်: ရှေ့နေ, တရားသူကြီး
ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှာကြီးပြင်းဆိုနီယာ Sotomayor, သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်အဘို့, မေလ 26, 2009 ရက်တွင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်အတည်ပြုခြင်းကြားနာပြီးနောက်ဆိုနီယာ Sotomayor အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်အပေါ်အမှုဆောငျဖို့ပထမဦးဆုံးဟစ်စပန်းနစ်တရားမျှတရေးနှင့်တတိယအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆိုနီယာ Sotomayor တစ်ဦးအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် Bronx မှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူမ၏မိဘများ Puerto Rico တှငျမှေးဖှားနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနယူးယောက်သို့ရောက်လာသည်ခဲ့ကြသည်။
ဆိုနီယာ Sotomayor သူမက 9. သူမရဲ့မိခင်, Celina အခါ, တစ်ဦးအဖြစ် methadone ဆေးခန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်, သူမ 8. အခါသူမသည်သူမ၏ဖခင်တစ်ဦး tool ကို၏မသေမှီတိုင်အောင်အများအားဖြင့်စပိန်စကားပြောနှင့်ထုတ်လုပ်သူသေဆုံးလူငယ်ဆီးချိုရောဂါ (Type ငါ) နဲ့သိလိုက်ရတယ် သူနာပြုနှင့်ပုဂ္ဂလိကကက်သလစ်ကျောင်းများမှသူမ၏ကလေးနှစ်ယောက်, Juan (ယခုဆေးသမား) နှင့်ဆိုနီယာကိုစေလွှတ်။ ,
ဆိုနီယာ Sotomayor ကျောင်းလွန်ကဲနှင့်ဖိ Beta ကို Kappa တွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အပါအဝင်ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူ Princeton မှာသူမ၏ဘွဲ့ကြိုလေ့လာမှုပြီးဆုံးနှင့်အမ်တေလာ Pyne Prize ကို, အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆု Princeton မှာတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများပေး။ သူမသည်သူမယေးလ်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏ 1979 ခုနှစ်ထဲတွင်အယ်ဒီတာဖြစ်ခြင်းနှင့် World ပြည်သူ့အမိန့်ထဲမှာယေးလ်လေ့လာရေးအယ်ဒီတာစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ဂုဏ်ထူးခဲ့ယေးလ်မှာ 1979 ခုနှစ်ယေးလ်ဥပဒေကျောင်းမှဥပဒေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
သူမသည် 1979 ကနေ 1984 ခုနှစ်နယူးယောက်မြို့ကောင်တီခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ရုံးအတွက်တစ်ဦးအစိုးရရှေ့နေအဖြစ်မန်ဟက်တန်ခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ရောဘတ် Morgentha မှလက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Sotomayor နယူးယောက်စီးတီးရှိ Pavia နှင့် Harcourt မှာတွဲဖက်ပါမောက္ခများနှင့်မိတ်ဖက်အဖြစ် 1984 ကနေ 1992 ခုနှစ်အထိနယူးယောက်စီးတီးရှိပုဂ္ဂလိကအလေ့အကျင့်၌ရှိ၏။
သူမသည်အမေရိကန်တရားရုံးအပေါ်တစ်ဦးထိုင်ခုံအဘို့, ဇွန်လ 25, 1997 ရက်တွင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရဆိုနီယာ Sotomayor ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်, နိုဝင်ဘာလ 27, 1991 ရက်တွင်ဂျော့ HW ဘုရ်ှကအမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရ, သူ 1992 သြဂုတ်လ 11 ရက်နေ့တွင်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဝီလျံဂျေကလင်တန်တို့ကအယူခံ, ဒုတိယအချက်ကတိုက်နယ်, နှင့်အထက်လွှတ်တော်ရီပတ်ဘလီကန်ကရှည်လျားနှောင့်နှေးပြီးနောက်အောက်တိုဘာလ 2, 1998 ရက်တွင်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ၏ အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama တရားမျှတရေးဒါဝိဒ်သည် Souter အားဖြင့်ကျင်းပသည့်ထိုင်ခုံအဘို့, မေလ, 2009 ခုနှစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်အပေါ်တစ်ဦးတရားမျှတမှုကိုအဖြစ်သူမ၏အမည်စာရင်းတင်သွင်း။ သူမသည်သူမအတွေ့အကြုံများကို၏ပေါများကြွယ်ဝနှင့်အတူတစ်ဦးသောပညာရှိ Latina အမျိုးသမီးတစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာခဏမထက်ပိုကောင်းတဲ့နိဂုံးချုပ်ရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့က "အထူးသဖြင့်အကြောင်းကို 2001 ခုနှစျကနေသူမကိုကြေညာချက်န်းကျင်ကိုအာရုံစိုကျ, ရီပတ်ဘလစ်ကန်ကနေခိုင်မာတဲ့ဝေဖန်မှုများပြီးနောက်သြဂုတ်လ, 2009 ခုနှစ်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့သည် ဘဝနေထိုင်ခဲ့မရှိသေးပေသူတစ်ဦးအဖြူအထီးထက်။ "
ဆိုနီယာ Sotomayor လည်း 2007 ခုနှစ်မှဥပဒေ, 1998 ခုနှစ်၏ NYU ကျောင်းမှာတွဲဖက်ပါမောက္ခများနှင့် 1999 ခုနှစ်တွင်စတင်ကိုလံဘီယာဥပဒေကျောင်းမှာကထိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုနီယာ Sotomayor ရဲ့ဥပဒေရေးရာအလေ့အကျင့်ယေဘုယျအရပ်ဘက်တရား, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မူပိုင်ခွင့်ပါဝင်သည်။
Cardinal Spellman High School တွင်, Bronx, နယူးယော့
summa cum ခြီးမှမျး Princeton တက္ကသိုလ်, BA ဘွဲ့ 1976, phi Beta ကို Kappa, အမ်တေလာ Pyne Prize ကို
ယေးလ်ဥပဒေကျောင်း, JD 1979
ယေးလ်ဥပဒေကျောင်း, LLD 1999,
ခမညျးတျော: (သူမကိုးခဲ့ကြသောအခါ tool ကိုများနှင့်ထုတ်လုပ်သူသေဆုံး, သေဆုံး),
မိခင်: Celina (က methadone ဆေးခန်းမှာသူနာပြု)
အစ်ကို: Juan, ဆေးသမား
ခင်ပွန်း: ကီဗင်အက်ဒွပ်လမ်းပြ Noonan (1983 ကွာရှင်းသြဂုတ်လ 14, 1976 လက်ထပ်)
အဖွဲ့အစည်းများ: အမေရိကန်ဘားအသင်းဟစ်စပန်းနစ်တရားသူကြီးမှတ်စာ၏အသင်းဟစ်စပန်းနစ်ဘားအစည်းအရုံး, နယူးယောက်အမျိုးသမီးဘားအစည်းအရုံး, အမေရိကန်ဒဿနပညာရှင် Society က
* မှတ်ချက်: ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Cardozo, 1932 ကနေ 1938 မှတရားရုံးချုပ်၏တွဲဘက်တရားမျှတရေး, ပျေါတူဂီ (Sephardic ဂျူး) နွယ်ဖွားခဲ့ပေမယ့်အသုံးအနှုန်း၏လက်ရှိသဘောအရဟစ်စပန်းနစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူခွဲခြားသတ်မှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဘိုးဘေးတို့အမေရိကန်တော်လှန်ရေးမတိုင်မီအမေရိကတိုက်ရှိကြ၏, ထို Inquisition ကာလအတွင်းပေါ်တူဂီကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အမ်မာလာဇရု, ကဗျာဆရာ, သူ့ဝမ်းကွဲဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲလစ်ဇဘက် Garrett Anderson က
Frances Ellen Watkins Harper ကို
Ellen Gates က Starr
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Ursula K. သည် Le Guinness
ပြင်သစ်၏ Judith (ဖလန်းဒါးစ်၏ Judith): Saxon အင်္ဂလိပ်ဘုရင်မကြီး
မာရီ Curie: ခေတ်သစ်ရူပဗေဒ၏မိခင်, ရေဒီယိုသတ္တိကြွ၏သုတေသီ
အဆိုပါလမ်စုန်းစမ်းသပ်မှုယောဟန် Alden Jr .: ပုံ
ဟီလာရီနှင့်က Black Panther: ပုံကြီးချဲ့
Gallaudet University မှအဆင့်လက်ခံရေး
အခက်ခဲဆုံး Element ကိုဆိုတာဘာလဲ
ကောလိပ်အတွက်နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုဖြုန်းဖို့ 20 နည်းလမ်းများ
ယေရှုအဘယ်ကြောင့် Die မှဖူးသလား?
ဂျာမန်ကြိယာ conjugation - Lassen (ကြစို့ Leave နှင့် Allow ရန်)
အဘယ်ကြောင့် Xmas အတွက် X ကိုရှိပါသလော ဒါဟာ Sacrilegious သည်မဟုတ်လော
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘဝရဲ့ဓာတုတုံ့ပြန်မှု 10 ဥပမာများ
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း 10 ခန်းမ & Oates သီချင်းများ
Coventry မှတဆင့် lady Godiva ရဲ့နာမည်ကြီးစီးနင်
အဆိုပါသွယ်ဝိုက် Utility ကိုရာထူးအမည်ဟာဘာလဲ,
အဆိုပါအခြေခံပညာဓာတုဂြာမနျတွင် Element တွေကိုနှင့်အင်္ဂလိပ်
အလိုလေး! ပြည်သူ့မတော်တဆအမြင့်ရယူခြင်းအကြောင်း5Funny ပုံပြင်များ
သမိုင်းနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး Beverage ၏ Origins
အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအခြားအမျိုးအစားများ vs. ဆိုရှယ်လစ်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ
သင့်ရဲ့ 1L တစ်နှစ်တာအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လုပ်နည်း
Dark matter: အဘယျသို့အခန်းက္ပက Galaxy အတွက် Play ပါသလား?
အဆိုပါ Dsus2 Chord Play လုပ်နည်း